संक्रमितलाई सकसः लक्षणसहितका संक्रमितले नै पाउँदैनन् अस्पताल – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
१७ भाद्र, काठमाण्डौ । काभ्रेका रविन सेढाईंलाई कोरोना संक्रमण भएको भन्दै कुपण्डोलस्थित विध म्यानेजमेन्टले आइतबार सम्पर्क गर्यो । त्यसपछि उनी अलमलमा परे । काठमाडौंका विभिन्न अस्पताल धाए । तर, उनले शय्या पाउन सकेनन् । उनले भने, ‘संक्रमित भए पनि अस्पतालले भर्ना गर्नै मान्दैनन् । म पनि सोमबार दिनभरि भौतारिएँ ।’ उनले आफूसँगै संक्रमण पुष्टि भएका नौ जना सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको बताए ।
रिपोर्ट पोजेटिभ आएमा संक्रमित आफँैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. माधव लम्साल र लीला विक्रम थापालाई सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । इडिसिडीले लक्षणसहितका संक्रमितले डा. लम्साललाई ९८५१२३४२२९ र लक्षण नभएका संक्रमितले थापालाई ९८५११४७३६१ मा फोन गर्न आग्रह गरे पनि केही संक्रमितहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।
यस्तै, मंगलबार देशभर थप १ हजार ६९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । योसहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ४० हजार ५ सय २९ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ सय ६८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका
छन् । योसहित नेपालमा हालसम्म २२ हजार १ सय ७८ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
देशभर ७ हजार ३ सय ९० जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । हाल देशभर १८ हजार १ सय १२ जना आइसोलेसनमा उपचाररत
छन् । संक्रमितमध्ये मंगलबार ११ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ३९ पुगेको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका हुन् ।